တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည ၁၂ နာရီတိတိ မှာ ပံ့သကူပစ်ပါ…ဘာကြောင့်လဲ – Shwe Naung
Shwe Thuta | November 20, 2020 | Knowledge | No Comments
ပံသကူ ပစ္စည်း – ဘယ်သူ ကမှ ဒါငါ့ဟာလို့ မဆွပ် ဆွဲဘဲ အလိုအလျော က် ရတဲ့ပစ္စည်း၊ ရောက်လာ တဲ့ပစ္စည်းကို ပံသကူပစ္စည်းလို့
ခေါ်ပါတယ် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည ၁၂ နာရီမှာ ပံ့သကူပစ်ပါ။ ကိုယ်ပြန်ရမယ့် စီးပွားလာဘ် လာဘကိုမမျှော်ကိုးပဲ စိတ်စေတနာသန့်ရှင်းစွာ ပံ့သကူပစ်ပါ။ အစစအရာရာ ကြပ်တည်းလာတဲ့ခေတ်မှာ ပံ့သကူပစ်ပါ ရတဲ့သူ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ငွေပမာဏ နဲသည်ဖြစ်စေ
များသည်ဖြစ်စေ ပစ္စည်းနဲ သည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်တတ်နိုင်သည့် ပမာဏလေးကို စေတနာများစွာဖြင့် ပံ့သကူပစ်ပါ။ နောင်ဘဝရမည့်ကုသိုလ်၊ ယခုရမည့် ကုသိုလ် အသာထား ကြပ်တည်းနေကြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့် ပံ့သကူလေးကြောင့် ရတဲ့သူပျော်သွားရင်
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည ၁၂ နာရီတိတိ မှာ ပံ့သကူပစ်ပါ
ကိုယ်ပီတိဖြစ်ရတာက အခုချက်ခြင်းရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ သူခိုးကြီးညမှာ စနောက်ပြီး ကျီးမနိုးပွဲလုပ်ကြသလို ပံ့သကူပစ်ပွဲ အစဉ်အလာလေးလဲ ဆက်ထိန်းသိမ်းကြပါစို့နော်။ ချစ်စရာ့ယဉ်ကျေးမှုလေးကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ငွေ ၅၀၀ဖြစ်စေ
ဆန်အိပ်သေးသေးလေးဖြစ်စေ ဖန်ခွက်လေးတစ်ခုဖြစ်စေ ပံ့သကူပစ်ပါသည်လို့ စာလေးရေးပြီးပံ့သကူပစ်ကြပါနော်။ ပံ့သကူရတဲ့သူကလည်း မည်သူမည်ဝါပေးမှန်းမသိတော့ ဦးဘယ်သူက၊ ဒေါ်ဘယ်သူက ငါ့ကို ပေးကမ်းထားတာပဲဆိုတဲ့ အကြွေးလို ခံစားရမည့်အသိ
ကျေးဇူးကြွေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး လည်း မရှိတော့ဘူး။ သူလည်း လွတ်လွပ်စွာပျော် ကိုယ်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမရှိ ဖြူစင်စွာလှူ ဘယ်လောက် ဖြူစင် အေးချမ်းလိုက်သလဲ။ ပံ့သကူပစ်တဲ့အခါ ဗုံးလား၊ မသာမာတဲ့ ပစ္စည်းလားဆိုပြီး မြင်တဲ့သူ စိတ်မပူရအောင် ကိုယ်လှူမယ့်ပစ္စည်းက
(၁) အိတ်နဲ့ထည့်မှ ရမည်ဆိုလျှင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အကြည်သုံးပေးပါ။ (၂)အိတ်မလိုရင် ဒီအတိုင်းလေးပစ်ပါနော် အထူးအရေးကြီးတာက “ပံ့သကူပစ်ပါသည်” ဆိုတဲ့စာလေး ကပ်ထားပေးနော် ရတဲ့သူတွေ ဘေးကင်းပြီး သောက ကင်းစွာ ရယူနိုင်ကြပါစေ။
ကျမတို့ တန်ဆောင်မုန်းလပြ ည့်ညမှပံ့သကူပစ်တဲ့ အစဉ်အလာလေး ပိုပြီးတွင်ကျယ်လာအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပါဝင်ကြမယ်နော်။ ရယူတဲ့ပျော်ရွှင်မှုထက် ပေးကမ်းလို့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကပိုအေးချမ်းရတယ် မဟုတ်လား။
ပံသကူ ပစၥည္း – ဘယ္သူ ကမွ ဒါငါ့ဟာလို႔ မဆြပ္ ဆြဲဘဲ အလိုအေလ်ာ က္ ရတဲ့ပစၥည္း၊ ေရာက္လာ တဲ့ပစၥည္းကို ပံသကူပစၥည္းလို႔
ေခၚပါတယ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ည ၁၂ နာရီမွာ ပံ့သကူပစ္ပါ။ ကိုယ္ျပန္ရမယ့္ စီးပြားလာဘ္ လာဘကိုမေမွ်ာ္ကိုးပဲ စိတ္ေစတနာသန႔္ရွင္းစြာ ပံ့သကူပစ္ပါ။ အစစအရာရာ ၾကပ္တည္းလာတဲ့ေခတ္မွာ ပံ့သကူပစ္ပါ ရတဲ့သူ ေပ်ာ္႐ႊင္ပါေစ။ ေငြပမာဏ နဲသည္ျဖစ္ေစ
မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ပစၥည္းနဲ သည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏေလးကို ေစတနာမ်ားစြာျဖင့္ ပံ့သကူပစ္ပါ။ ေနာင္ဘဝရမည့္ကုသိုလ္၊ ယခုရမည့္ ကုသိုလ္ အသာထား ၾကပ္တည္းေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ ပံ့သကူေလးေၾကာင့္ ရတဲ့သူေပ်ာ္သြားရင္
ကိုယ္ပီတိျဖစ္ရတာက အခုခ်က္ျခင္းရတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးပါပဲ။ သူခိုးႀကီးညမွာ စေနာက္ၿပီး က်ီးမႏိုးပြဲလုပ္ၾကသလို ပံ့သကူပစ္ပြဲ အစဥ္အလာေလးလဲ ဆက္ထိန္းသိမ္းၾကပါစို႔ေနာ္။ ခ်စ္စရာ့ယဥ္ေက်းမႈေလးကို ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ေငြ ၅၀၀ျဖစ္ေစ
ဆန္အိပ္ေသးေသးေလးျဖစ္ေစ ဖန္ခြက္ေလးတစ္ခုျဖစ္ေစ ပံ့သကူပစ္ပါသည္လို႔ စာေလးေရးၿပီးပံ့သကူပစ္ၾကပါေနာ္။ ပံ့သကူရတဲ့သူကလည္း မည္သူမည္ဝါေပးမွန္းမသိေတာ့ ဦးဘယ္သူက၊ ေဒၚဘယ္သူက ငါ့ကို ေပးကမ္းထားတာပဲဆိုတဲ့ အေႂကြးလို ခံစားရမည့္အသိ
ေက်းဇူးေႂကြး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ သူလည္း လြတ္လြပ္စြာေပ်ာ္ ကိုယ္လည္း ပုဂၢိဳလ္စြဲမရွိ ျဖဴစင္စြာလႉ ဘယ္ေလာက္ ျဖဴစင္ ေအးခ်မ္းလိုက္သလဲ။ ပံ့သကူပစ္တဲ့အခါ ဗုံးလား၊ မသာမာတဲ့ ပစၥည္းလားဆိုၿပီး ျမင္တဲ့သူ စိတ္မပူရေအာင္ ကိုယ္လႉမယ့္ပစၥည္းက
(၁) အိတ္နဲ႔ထည့္မွ ရမည္ဆိုလွ်င္ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ အၾကည္သုံးေပးပါ။ (၂)အိတ္မလိုရင္ ဒီအတိုင္းေလးပစ္ပါေနာ္ အထူးအေရးႀကီးတာက “ပံ့သကူပစ္ပါသည္” ဆိုတဲ့စာေလး ကပ္ထားေပးေနာ္ ရတဲ့သူေတြ ေဘးကင္းၿပီး ေသာက ကင္းစြာ ရယူႏိုင္ၾကပါေစ။
က်မတို႔ တန္ေဆာင္မုန္းလျပ ည့္ညမွပံ့သကူပစ္တဲ့ အစဥ္အလာေလး ပိုၿပီးတြင္က်ယ္လာေအာင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပါဝင္ၾကမယ္ေနာ္။ ရယူတဲ့ေပ်ာ္႐ႊင္မႈထက္ ေပးကမ္းလို႔ရတဲ့ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကပိုေအးခ်မ္းရတယ္ မဟုတ္လား။
ကြည့်ပီး ကြက်သီးတွေထပြီး ခေါင်းမွှေးတွေပါ ထောင်သွားရစေမယ့် ထူးထူးခြားခြား ပုံရိပ်များ
မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ….
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် လူချစ်လူခင်များအောင် comment ရေးနည်းများ
ညို့အားပြင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………..
လုံးတင်းနေတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလန်းစားကြီးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ကပြထားတဲ့ စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ အကိတ် ဗီဒီယို‌လေး…………..
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ ရွှေကစ်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……….
ဖြူဖွေးနေတဲ့ အသားအရည်လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိနေတဲ့ ခင်ရတီသင်းရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……….
ချောကလက် အရောင်လေးနဲ့ အထာကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးပီး မိမိုက်နေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အလှ ဗီဒီယိုလေး……….
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေ အထင်းသား ပေါ်အောင် ပိုစ့်ပေး ကြမ်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဝင်းရွှေရည်သင်းရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………